IProtea Hotels yiMarriott yomeleza ukunyathela eNigeria
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Icandelo lokungenisa izihambi » IProtea Hotels yiMarriott yomeleza ukunyathela eNigeria
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula iNigeria News • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Utyalo mali • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
IProtea Hotels nguMarriott, eyinxalenye yeMarriott International, Inc., namhlanje ibhengeze ukuvulwa kweProtea Hotel nguMarriott, Owerri Select eMzantsi-Mpuma weNigeria, uphuhliso, oluqinisa ubukho balo elizweni.
Ihotele enamagumbi angama-90, ephuhliswe yiAfrican Capital Alliance, inkampani ehamba phambili yotyalo-mali, kunye neKunoch Limited, ikwisixeko saseOwerri, ikomkhulu le-Imo State. Imo State ibizwa ngokuba yi "Heartland" kwaye ithathwa njengekomkhulu lokuzonwabisa laseMpuma Nigeria. Urhulumente ukwangumvelisi weoyile kunye negesi yendalo kwaye likhaya kwinani elikhulu leeofisi zeenkonzo zeoyile nezemali zengingqi.
Ethetha ngokuvulwa kwehotele, uMnu. Volker Heiden, usekela-Mongameli Protea kwiihotele zika Marriott, Marriott International uthe: “Ukuvulwa kwe Protea Hotel nguMarriott, Owerri Select, kubonisa ukuzithemba kwethu kwi Nigeria kwaye kuyahambelana ukuzibophelela ekukhuleni kwizixeko ezikwinqanaba lesibini kwilizwekazi liphela. Ukwanda nje kwesi sikhululo seenqwelomoya kwesi sixeko, kuza kwenza ukuba isixeko sifikeleleke ngcono, esiqinisekileyo ukuba siza kuqhuba neshishini. ”
Umnumzana Obiora Nwogugu, iNqununu kunye neNtloko yeNtengiso kwiAfrican Capital Alliance wongeze wathi, “Le hotele intsha lulongezo olubalulekileyo kwiihotele esele sinazo kwizixeko zaseLagos naseBenin eNigeria, naseTakoradi eGhana. Kuyasivuyisa ukuphinda sisebenzisane neProtea Hotels yiMarriott, eyonwabela ukulingana okuqinisekileyo kweempawu zommandla nokwazisa kudityaniswa nokusasazwa kweMarriott International. ”
Ichazwe 'njengelizwekazi lamathuba ngenkulungwane yama-21', iAfrika iyaqhubeka nokuba sisindululo sotyalo-mali olunomtsalane kwiinkampani ezininzi zehlabathi kubandakanya nomzi mveliso wehotele. IMarriott International, ehamba phambili ekusebenziseni ihotele kwilizwekazi, ngoku isebenza ngaphezulu kwehotele ezili-140 kumazwe angama-20 kwaye ijolise ekukhuleni okucetywayo ngowama-2022 ngaphezulu kwama-200 eehotele anamagumbi angaphezu kwama-36,000 kumagumbi asebenzayo nakwimibhobho yeehotele.
Ngo-2021 iiDolophu zase-US zePaki yeeNja
Umngcipheko ophezulu kakhulu: IHong Kong iyakwalela bonke abakhweli ...
IRoyal Caribbean ifika ukwamkelwa ngokufudumeleyo eGrand Bahama
I-Tropical Storm Elsa ishiya iJamaica nge- $ 803 yezigidi ...
I-Bahamas yamkela i-Frontier Airlines yokuvula inqwelomoya ...
Iindawo zokutyela kunye nemivalo yaseMoscow ngoku zifuna ubungqina be-COVID ...
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica ubulela uluntu lwaseSt.